Indlela yophuhliso - iEurborn Co., Ltd.
2020 ngowona nyaka unzima. Ukuze ubuyisele eluntwini nakubathengi bethu, u-Eurborn uzama ngandlela zonke ukunceda wonke umntu. Sinikele ngesixa esikhulu sotywala bezonyango kunye neemaski. Kungakhathaliseki ukuba luhlobo luni lobunzima, siya kukhetha ukulwa nani kunye.
Kwi-2019, kurhoxa abantu kunye nenkcubeko, saqala ukubonelela ngezicwangciso zonyaka zokuhamba kubasebenzi bethu abaphambili minyaka le.
Kwi-2018, sonyuse isikali sesebe lokuthengisa saza sayisa kwi-CBD yedolophu yaseDongguan.
Ngo-2017, kuya kubakho ukongezwa kwepaseji yomoya. Inokubambelela ngokukhawuleza kubumdaka bempahla, iinwele, neenkunkuma zeenwele, ezinokunciphisa iingxaki zongcoliseko ezibangelwa ngabantu abangena nabashiya indawo ezicocekileyo.
Ngo-2016, yonke into esiyenzileyo igqibelele ngokudibanisa i-CREE LED package. Ukufezekisa owona mgangatho uphezulu kunye nokusebenza okuphezulu kwe-LED, gqibezela yonke inkqubo ye-SMD endlini.
Ngo-2015, siye songeza izixhobo ze-5 ze-CNC ezivela eJapan kunye noomatshini aba-6 be-Sodick ochanekileyo abavela eJapan.
Ngo-2013, ukwenzela ukuba ukuqokelelwa kwedatha kuchaneke ngakumbi kwaye kufikelele kumthamo omkhulu wokugcina, siphucule lonke uthotho lwezixhobo kwi "EVERYFINE" brand, ezinzileyo nethembekileyo ekusebenzeni kwaye inamandla okulwa nokuphazamiseka.
Ngo-2012, ukubonelela ngohlalutyo oluzinzileyo, olulungeleyo, olukhawulezayo noluchanekileyo, sithathe indawo yomvavanyi wakudala kwaye sasebenzisa i-brand ETSHAYELEKILEYO ye-brand.
Ngo-2011, ukuze kuhlangatyezwane umgangatho mveliso uhlolo ngamazwe, saqala ukulungisa umgca wemveliso kunye nokuqhuba rhoqo uqeqesho umlilo zokomba umqeshwa.
Ngo-2010, iqela lethu ukuthengisa ngamazwe baqalisa ukuthatha inxaxheba kwi-International Izibane Show.
Ngo-2008, umgca wemveliso yesebe sokubumba yongezwa.
I-Eurborn Co., Ltd yabhaliswa ngokusemthethweni ngo-2006.